Manchester United Oo Indhaha Ku Heysa Inay U Dhaqaaqdo Weeraryahan Ka Tirsan Dortmund
Home Horyaalka Germalka Manchester United oo indhaha ku heysa inay u dhaqaaqdo Weeraryahan ka tirsan...
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay ku kalsoon tahay inay la soo saxiixaneyso garabka kooxda Borussia Dortmund Jadon Sancho inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Red Devils ayaa si aad ah loola xiriirinayay ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England xagaagii laakiin diyaar uma aysan aheyn inay la kulmaan qiimaha Die Borussen ee ku aadan xiddigii hore ee Manchester City.
Sancho ayaa ku dhibtooday inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisii ​​ugu fiicnaa BVB xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay hal gool 11 kulan oo uu saftay Bundesliga, in kasta oo Jadon uu ku darsaday shan gool iyo sideed caawin 18 kulan oo tartamada oo dhan ah.
Sida laga soo xigtay 90min, Red Devils ayaan ka walwal qabin qaab ciyaareedka 20 jirkaan xilli ciyaareedkan, waxaana ay kalsooni ku qabaan inay ku heli doonaan wax ka yar 100 milyan euro ka hor xilli ciyaareedka 2021-22.
Qandaraaska Sancho ee kooxda ka dhisan Signal Iduna Park ayaa weli waxaa uga harsan labo sano iyo bar kale, taasoo la micno ah in kooxdiisa Jarmalka aysan culeys weyn kala kulmi doonin inay iibiso suuqa xagaaga.
Previous articleArsenal oo u safreysa Kooxda Southampton Xili uu ka maqanyahay Pierre-Emerick Aubameyang
Next articleGary Neville oo muujiyay Hal Sabab oo Shaqada looga Ceyriyay Frank Lampard